अबिबाहित छोरी गर्बबती भएपछि घरमा भयो हंगामा ,आमाले छोरीलाइ समाजको बीचमा यस्तो गरिन (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
अबिबाहित छोरी गर्बबती भएपछि घरमा भयो हंगामा ,आमाले छोरीलाइ समाजको बीचमा यस्तो गरिन (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki January 12, 2019
झापा दमक । नेपाली कमेडी तथा अन्य भिडियोको निर्माण आजकल धेरै बढेको देखिन्छ । बिभिन्न बिषयमा समाबेश गरि मानिषहरुलाई मनोरंजन दिनका लागि दिनानु दिन यस्ता भिडियोहरु निर्माण भैरहेका छन् । यो भिडियोमा एक परिवारको बारेमा कथा तयार पारिएको छ। अबिबाहित छोरी गर्बबती भएको कथा यहाँ रहेको छ। साथमा छोरी गर्बबती भएको थाहा पाए पछि आमा बुबाले के गर्छन त ?
जनचेतनाका लागि यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै सेयर गर्दिनुहोला ।मनोरन्जन तथा संदेशका लागि बनाइएको यो भिडियो नेपालका भिभिन्न ठाउमा छायांकन गरिएको हो । दर्शकलाइ भरपुर मनोरंजन दिने उदेश्यले निर्माण गरिएको भिडियोमा कार्यरत प्राबिधिक टोलिहरु पूर्वका रहेका छन् । आजकल धेरै प्रकारका कमेडी लगायत अन्य धारका छोटा चलचित्रहरु निर्माण हुने गर्दछन । दर्शकलाई मोनोराञ्जन प्रधान गर्ने यस भिडियोमा समाजमा उत्पन्न भएका भिभिन्न बिकृतिहरुलाई ब्यंगात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरेर त्यस्ता कार्यहरुलाई रोक्नपनि भूमिका खेलेको छ । यो भिडियोमा अबिबाहित छोरी गर्बबती भएपछि आमा बुबाले के गरे त ? तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।